Roobab dad ku laayey Muqdisho xilli abaaro xooggan laga soo sheegayo meelo badan oo Soomaaliya ah. – Radio Daljir
Roobab dad ku laayey Muqdisho xilli abaaro xooggan laga soo sheegayo meelo badan oo Soomaaliya ah.
Muqdisho, July 14 – Roobab xooggan oo khasaaro naf iyo maalba ah gaystay ayaa dhawrkii habeen ee ugu dambeeyey ka da’ayey magaalada Muqdisho kuwaasi oo inta la hubo dilay 6 qof kuwo kalena taag-darreeyey.
Roobabkaan oo ahaa kuwii xagaayada ee inta badan ka da’a gobollada koonfureed ee dalka ayaa dadka ku dhintay oo ahaa carruur iyo dad da’ ah, waxay ka tirsanaayeen barakacayaasha deggan xeryaha magaalada Muqdisho, waxaana sidoo kale roobabku ay cagta mariyeen guriyo badan oo ay degganaayeen.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur ‘Tarsan’ oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay hubantida dhimashada lixdaasi ruux kuwaasi oo u badnaa kuwa la il-daranaa xanuuno iyo nafo-darri ka dhalatay abaaraha iyo saboolnimada Soomaaliya.
Da’itaan roobabkaan khasaaraha gaystay ayaa ku soo aadaya xilli magaalada Muqdisho ay gaareen kumanaan qoys oo ka soo cararay abaaro iyo biyo la’aan baahsan oo ka dhacday dhulalkii ay ku noolaayeen taasoo marisay wixii mood iyo maal ay lahaayeen.